प्रदेशमा १३ ‘मोडल सिटी’ बनाउँछौं – Rajdhani Daily
प्रदेशमा १३ ‘मोडल सिटी’ बनाउँछौं
डोरमणि पौडेल स्थानीय विकास निर्माणको क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्ति हुन् । स्थानीय विकास निर्माण र स्रोतसाधन परिचालनका सम्बन्धमा उनीसँग लामो अनुभव छ । हेटांैडा नगरपालिकाका प्रमुखका रूपमा दुईपटक जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पौडेलले हेटौंडालाई सुन्दर, सफा र हरियाली सहरका रूपमा विकास गर्न महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । विकासको सवालमा स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ इच्छाशक्ति र स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिका रूपमा उनलाई चिनिन्छ । प्रदेश ३ ले यिनै पाका व्यक्ति मुख्यमन्त्रीका रूपमा पाएको छ । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका पौडेलको काँधमा अब १३ जिल्लाको विकास निर्माण कार्यको नेतृत्व गर्ने दायित्व आएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलसँग राजधानी दैनिकका वरिष्ठ समाचारदाता सविन शर्माले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
डोरमणि पौडेल, मुख्यमन्त्री, प्रदेश ३
सर्वप्रथम तपाईलाई प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री बन्नुभएकोमा बधाई तथा शुभकामना ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार कहिले हुन्छ ?
मन्त्रीमण्डल विस्तारमा कुनै समस्याले रोकिएको हैन । जम्मा हामीले सात जनाको मन्त्रीमण्डल बनाउने हो । त्यसमध्ये तीन जना भइसकेका छन् । बाँकी चार जनाको नियुक्ति केही प्राविधिक कुराले गर्दा रोकिएको हो । अहिले सबै कुरा भइसकेको छ । जुनसुकै समयमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकिन्छ । अहिले हाम्रो प्रदेश प्रमुख उपचारका लागि भारत जानुभएको छ । उहाँ फर्केर आएपछि शपथको कार्यक्रम हुनेछ ।
सरकारले अस्थायी राजधानीमा हेटांैडा तोकेको छ । यही स्थायी हुन्छ कि विकल्पको खोजी हुन्छ ?
प्रदेशको राजधानी सार्नु नै पर्छ भन्ने विषयमा कसैले आधिकारिक रूपमा अघि बढाएको छैन । कहीँ कतै राजधानी सार्नुपर्छ भन्ने आवाज सुनिएको छ । राजधानी सार्नु नै पर्छ भन्ने पनि छैन । यसमा के कति कारणले राजधानी सार्ने भन्ने विषय मुख्य हो । सार्ने नै हो भने पनि त्यसको विधि प्रक्रिया छ । संविधानले नै दुई तिहाइ सदस्यले राजधानी सार्न चाहेमा सार्न सक्छ । दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी सार्नुपर्छ भनेर आयो भने त्यसलाई हामीले रोकेर
पनि रोकिँदैन ।
तर, यसमा मेरो धारणा भन्ने हो भने दुई तीन कारणले राजधानी सार्नु आवश्यक छैन । पहिलो हामीले काठमाडौंलाई पनि हेर्ने हो नि त । यो मुलुकको राजधानी यही प्रदेशमा पर्दछ । काठमाडौंलाई व्यवस्थित कसरी बनाउने भन्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । मैले नगरपालिका र नगरपालिका संघमा नेतृत्व गरेदेखि नै ‘काठमाडौंमा चाप बढी भयो । यसलाई डाइभर्ट गर्न उपत्यकाबाहिर स्याटेलाइट सिटी निर्माण गर्नुपर्छ र मान्छे बाहिरै रोक्नुपर्छ’ भन्ने विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छु । सहरी क्षेत्रको विषयमा बुझेको मान्छेले काठमाडौंको चाप घटाउनका लागि बाहिर स्याटेलाइट सहर निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन् । हामीले त्यही कुरा भनिरहेका छौं । अहिले राजधानीमाथि अर्को राजधानी थपेर यहाँ अझै चाप बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा शतप्रतिशत अवैज्ञानिक हो ।
काठमाडौं उपत्यकाबाहेकको क्षेत्रमा राजधानी सर्न सक्छ त ?
हेटौंडामा राजधानी हुन सकेन भने रामेछापमा हुन सक्छ, सिन्धुलीमा हुन सक्छ, बरु नुवाकोटमा हुन सक्छ । त्यसतर्फ पनि सोचिनुपर्छ । काठमाडौंमै किन थुपार्नुप¥यो । यदि हेटौंडाको भन्दा अन्त कतै भौतिक पूर्वाधार पुग्छ भने हामी किन हेटौंडा बस्ने ? नुवाकोट राजधानी लैजान दुई तिहाइ साथीहरू सहमति भए मलाई कुनै आपत्ति भएन । तर, ‘काठमाडौंमै सार्छौं’ भनियो भने त्यो सर्वथा आपत्तिजनक हुन्छ ।
हेटौंडासम्म पुग्न दुःख भयो भन्ने पनि सुनिएको छ नि ?
हेटौंडामा आवतजावत गर्न दुःख भयो भन्ने कुरा सुनिएको छ । काठमाडौंबाट अढाई तीन घण्टाको बाटो जान साँच्चै दुःख भएको हो भने कर्णालीबाट काठमाडौं आउने मान्छेलाई कति दुःख भएको होला भन्ने कुरा सम्झनोस् । सदियौंदेखि कर्णालीका मान्छेलाई काठमाडौं आउन भएको दुःख किन नहेरेको अहिलेसम्म ? कि त काठमाडौंको राजधानीलाई कर्णाली लैजानुप¥यो । फेरि, प्रदेश राजधानी भनेको जनताको सिधै सम्पर्क गर्ने निकाय पनि होइन । जनताको काम गर्ने निकाय भनेको स्थानीय तह नै हो । सबै स्थानीय तहमा नै काम हुन्छ । अहिले मुलुकको राजधानी सिंहदरबारमा मुलुकको एक प्रतिशत मान्छे पनि छिरेका छैनन् । राजनीति नेता, सांसद र कर्मचारीबाहेक जनताको प्रत्यक्ष प्रवेश सिंहदरबारमा नभएजस्तै प्रदेश राजधानीमा पनि जनताको प्रत्यक्ष काम पर्दैन ।
प्रदेशमा जनताका काम नहुने भएकाले जनतालाई केही दुःख हुँदैन । हेटौंडालाई जोड्ने ६ वटा सडक केही सञ्चालनमा भने केही निर्माण भइरहेका छन् । सुरुङमार्ग बनेपछि हेटौंडा र काठमाडौंको यात्रामा डेढ घन्टा पनि लाग्दैन । फास्ट ट्रयाक बनिरहेको छ । त्यो पूरा भएपछि दुई घन्टाको बाटो, कान्तिराजपथ एकदम ठूलो फराकिलो सडक बनिरहेको छ । धरान–चतरा सडक भनेर रामेछाप सिन्धुलीलाई हेटौंडा जोड्ने गरी सडक बनिरहेको छ । यस्तै, अहिले नै सञ्चालनमा रहेको कुलेखानी सडक तथा दामन हुँदै चल्ने सडकसमेत हेर्ने हो भने सडक सञ्जालले हेटौंडा उपयुक्त नै हो । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले सबैथोक सम्पन्न छ । अन्य ठाउँमा सार्दा सबै पूर्वाधार निमाण गर्नुपर्ने हुन्छ । राजधानी सार्नुपर्छ भन्ने आवाज मधुरो–मधुरो हुँदै गएको छ ।
प्रदेशको नामकरण कसरी गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? अहिले नै मैले यस्तै र यही नाम हुनुपर्छ भन्दा पहिला नै बोल्यो भन्ने कुरा उठ्न सक्छहोला । यो छलफलको विषय हो । म मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै केन्द्रीय राजधानी भएको प्रदेशलाई ‘राजधानी प्रदेश’ नामकरण हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । संघीय राजधानी भएकाले यसलाई राजधानी प्रदेश नै नामकरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । यस विषयमा पछि पनि बहस छलफल हुने नै छ । अन्य नाम पनि प्रस्ताव आउँला । त्यसको पनि विधि प्रक्रियाअनुसार टुंगो लगाउँला । तर, राजधानी प्रदेश राख्दा हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
विकासका योजनाहरू कस्ता बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा भनेको यो प्रदेशका १३ जिल्लालाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने गरी विकास गर्ने सोच छ । एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सजिलै जान सकिने एक्सिस हुनुप¥यो । अहिले भएका बाटाघाटालाई स्तरीकरण गर्ने हो कि अथवा थप बाटो घाटो निर्माण गर्नुपर्ने हो कि, यसको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं । १३ जिल्लाको भौगोलिक अवस्थाको बारेमा मैले पनि सबै बुझ्न बाँकी छ । केही समय अध्ययन गरेर १३ ओटै जिल्लाको आवश्यकता पहिल्याएर सबै जिल्लाको विकासका योजनाहरू तयार गर्ने सोचमा लागेको छु । सबै जिल्लामा एकै किसिमको विकासका कार्यक्रम गरेर हुँदैन ।
यो प्रदेशमा हिमालदेखि समथर भूभागसम्म रहेको छ । फरकफरक जिल्लामा भिन्न संस्कृति, भिन्न भौगोलिक अवस्था र भिन्न विकासको आवश्यकता छ । जुन जिल्लामा जस्तो विकासको आवश्यकता पर्छ, सोहीअनुसारको विकास गर्ने विषयमा हामी सचेत छौं । त्यही भएर भिन्नभिन्न किसिमका योजना बनाएर लैजाने हो । हामीसँग भएका स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौं । यस्ता स्रोतहरूको पहिचान गरेर त्यसको सही सदुपयोग गर्ने
विषयमा लाग्नुपर्छ ।
प्रदेशको समृद्धिका आधारहरू के के हुन् ?
समृद्धिको दिशातर्फ लैजानका लागि आफ्नो स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने काममा सबै लाग्नुपर्छ । मुलुकमा धेरै पँुजी विकासमा लगानी गर्न सकिएको छैन । नेपालीसँग भएको पुँजीलाई विकासमा लैजान नसक्दा उनीहरूले बाहिरी मुलुकमा लगानी गरिरहेका छन् । त्यस्ता पुँजी भएको व्यक्तिलाई लगानीको वातावरण बनाएर जानका लागि नियम कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । लगानीको वातावरण बनाउन केके गर्न सकिन्छ भनेर त्यस्तो लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने काम हामी गर्नेछौं । आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारी व्यवस्थापन गरेर सबैलाई रोजगारी बनाउने अभियान हामीले थाल्नेछौं । आफैंले गर्ने व्यवसायलाई रोजगारी नभन्ने संस्कृति मौलाएको छ । त्यस्तो मानसिकतालाई हटाएर सबैलाई व्यावसायिक बनाउँदै रोजगारी दिने बाटोमा लागौं ।
हाम्रो मुलुक कृषिप्रधान मुलुक भन्ने गरिन्छ । तर, यही मुलुकमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्दै व्यावसायिक कृषितर्फ कृषकलाई आकर्षण गर्न सकिरहेका छैनौं । नेपाली विदेशमा गएर कृषि क्षेत्रमै काम गर्ने तर आफ्नो मुलुकमा त्यसको प्रयोग गर्ने विषयमा लाग्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो परिस्थितिमा हामीले मुलुकको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक कृषि प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्बाैं खर्च घाटा बढ्ने गरेको छ । आफ्नो उत्पादन कुनै नहुनुले मुलुकको आर्थिक नाफाभन्दा पनि घाटा बढ्दै जानेछ । यसका लागि धेरै ऐन कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्छ । केही ऐन कानुन परिमार्जन गरेर मुलुकभित्र नै उत्पादन बढाउने र आयातभन्दा पनि निर्यात गर्ने विषयमा सचेत भएर समृद्ध मुलुक बनाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ ।
प्रदेश सञ्चालनका लागि के कस्ता ऐन कानुनको आवश्यकता देख्नुभएको छ ?
प्रदेशमा हामीलाई ६०–६५ वटा ऐनकानुन आवश्यक पर्छ । अहिले विभिन्न ऐनका विधेयक बनाउने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि प्रदेशको भौगोलिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । ऐन कानुन निर्माण गरेर मात्रै काम गर्ने हो । तर, अहिले तत्काल कुनै कानुन नहुँदा काम हुन सकिरहेको छैन । त्यसका लागि हामीले विधेयकहरू तयार पार्ने काम थालेका छौं । केही विधेयक संघीय सरकारले प्रस्तावका रूपमा पठाएका छन् । त्यसलाई पनि केही संशोधन गरी विधेयकको रूप दिने काममा हामी सक्रिय छौं ।
कडा कारबाहीको व्यवस्था भएको ऐनकानुन निर्माण आवश्यक छ भन्ने कुरा संघीय सरकारले बनाएका केही ऐनकानुनहरूबाट हामीले बुझ्न सक्छौं । कुनै ऐनले कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ तर त्यस्तै प्रकृतिको अर्को ऐनले भने त्यसमा उन्मुक्ति दिने गरेको हुनाले मुलुकमा नैतिकता भन्ने कुरा नै गुमेको जस्तो देखिएको छ । ऐनहरू कडा किसिमका बनाउन सकेमा मौलाउँदो भ्रष्टाचारलगायका विषय न्यूनीकरण गर्न योगदान पुग्न सक्छ ।
प्रदेशभित्रका प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा कस्तो सम्भावना रहेको छ ?
हाम्रो प्रदेशभित्र प्राकृतिक स्रोतहरू अथाह छन् । यो प्रदेशमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना छ । यो क्षेत्रमा जडिबुटीहरू पनि त्यत्ति नै छन् । यस्तो सम्भावना भएको क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्नसक्यो भने हाम्रा लागि त्यो नै सबैभन्दा ठूलो स्रोत बन्न सक्छ । यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म सही हिसाबले प्रचार नै हुन नसकिरहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरू प्रशस्त छन् । यस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहरू ओझेलमै छन् । यस्ता क्षेत्रको विकास गरी पर्यटक आकर्षित गर्ने योजना बनाउन सकिन्छ ।
हामीसँग जलस्रोत छ, जंगल छ, पर्यटकीय क्षेत्र छ र जमिन छ । लाखौं लाख उर्वरभूमि खेर गइरहेको छ । त्यस्ता खेर गएका जमिनमा ठूलाठूला फर्महरू निर्माण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं । त्यस्तो काममा विगतमा हामीले कुनै विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेका छैनौं । यस्तो विषयमा हामीले उपयोग गर्न नसक्दा नै यस्तो हुन पुगेको हो ।
प्रदेश ३ लाई ‘राजधानी प्रदेश’
अहिलेलाई राजधानी सार्नु
प्राकृतिक स्रोतका व्यवस्थित
प्रत्येक जिल्लामा फरकफरक
शैलीका सहर निर्माण हुनेछन्
हरेक नागरिकले अनुभूति
गर्ने गरी विकासको काम गर्छौं
प्राकृतिक स्रोतको उपयोग कसरी गर्ने ?
प्रदेशको विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि पहिला विधि तथा प्रक्रियाका लागि कानुनहरू बन्नुप¥यो । त्यसका लागि मैले गहिरो ढंगले अध्ययन गरेर मात्र काम गर्ने सोच बनाएको छु । हचुवाका भरमा काम गर्ने गल्ती गर्नुहुन्न । जे जे काम हुन सक्छ, त्यसको अध्ययनका लागि विशेषज्ञसँग छलफल गरेर नीति बनाएर मात्र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लाले अनुभूति गर्ने गरी जिल्लागत रूपमा आवश्यक पर्ने विकासका काममा प्रक्रियागत रूपमा काम गर्नेछु ।
नीति र कार्यक्रमहरू बनाउँदा हरेक जिल्लाका जनताले अनुभूति गर्ने गरी योजनाहरू बनाइनेछ । हामीसँग भएका जडिबुटीको संकलन तथा प्रशोधन गर्ने विषयमा कानुनी जटिलताहरू छन् । त्यस्ता जटिलतालाई समाधान गर्ने गरी काम गर्नेछु । जुन ठाउँमा लगानी गर्ने हो, त्यसबाट परिणाम आउने ठाउँमा मात्रै लगानी गर्ने वातावरण बनाउनेछु । खुत्रुके योजनामा लगानी गर्नुहुन्न भन्ने मेरो सोच हो । प्रदेशले लगानी गर्ने योजनाहरू पूर्ण हुने गरेर मात्रै लगानी गर्नेछु । यत्रतत्र पैसा छर्ने खालका योजनाहरू पूर्ण रूपमा रोकिनेछन् ।
काम गर्ने शैलीसँगै नीतिगत रूपमा नै सुधार गर्ने हाम्रो योजना छ । एक पैसा पनि खर्च नगरी सिंगो गाउँलाई हरियाली बनाउने योजना बनाउँदा समुदायलाई सहभागी बनाउने गरी काम गर्नेछु । विकासका काममा जनतालाई अपनत्व हुने खालका योजनाहरू बनाइनेछ । समुदायमा आधारित विकासको योजना बनाउने काममा प्रदेश सरकार सधै सक्रिय हुनेछ । सबैको सहयोगमा प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउने सोचमा छु ।
१३ जिल्लामा १३ ‘स्याटेलाइट सिटी’ बनाउने योजना कस्तो हो ?
यसका लागि दुई तरिका हुन सक्छ । यसमा सरकारले जग्गा लिएर त्यसमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार बनाएर सहर बनाउने र जग्गा विकास कार्यक्रममार्फत सहरको विकास गर्ने तरिका हुन सक्छ । त्यसका लागि हरेक मान्छेले प्रयोग गरिरहेको जग्गालाई एकीकृत गरेर त्यसको गुरुयोजना बनाएर जग्गा विकास कार्यक्रमको माध्यमबाट सहर निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नेछ ।
एकीकृत जग्गा विकासले टुक्राटुक्रा भएको जग्गालाई एक ठाउँमा बनाएर सहरका न्यूनतम आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू निर्माण हुनेछन् । त्यसका लागि प्राविधिक रूपमा विकास गर्नेछौं । आवासीय र औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा फरकफरक किसिमका घरहरू निर्माण गर्ने गरी योजना बनाइनेछ । सबै जिल्लामा ठूलाठूला सहर नबन्न सक्छन् । प्रत्येक जिल्लामा बन्ने सहर नमूना सहरका रूपमा विकास गर्नेछौं । प्रत्येक जिल्लाको आफ्नै कला संस्कृति र मौलिकता रहेको छ । त्यस्ता ठाउँहरूमा सबैको आकर्षण हुने गरी प्रत्येक जिल्लामा फरकफरक शैलीका सहर निर्माण गर्दा वैज्ञानिक विषयलाई महŒव दिइनेछन् । १३ जिल्लामा आधुनिक मोडल सीटी परिकल्पना गरेको मात्रै हैन, हामी गरेर नै देखाउनेछौं ।